कहिल्यै नहार्ने बिजयाको जीवनको घतलाग्दो महाभारत - Asian Samachar
Tuesday 27th , June 2017 | मङ्लबार, असार १३, २०७४
Toggle navigation गृहपृष्ठ
अन्य फोटो फिचर
कहिल्यै नहार्ने बिजयाको जीवनको घतलाग्दो महाभारत
Asian Samachar मङ्लबार, भदौ २८, २०७३ (10 months ago) अन्तर्वार्ता, देश, फिचर, बिचार/ब्लग
भौतिक मल्ल, देशमा माओवादी जनयुद्धले व्यापक रुप लिदै थियो । रोल्पा ,रुकुम, जाजरकोट माओवादी जनयुद्धका उर्वर भुमि बन्दै थिए । तत्कालिन सरकारले बिभिन्न बहानामा उक्त भेकका जनतालाई चरम दमन गरिरहेको थियो । त्यसैको मारमा स्कूले बिद्यार्थीदेखि बालबच्चा र बुढाबढी समेत परिरहेका थिए । त्यसैको जिउँदो मारमा परिन् बिजया । उनको बालमनस्थितिमा परेको दुःख,पीडा,युद्ध र संघर्षको अमिट छ । पले अन्ततः उनलाई वास्तविक बिजया बन्न सिकायो । कलिलै अबस्थामा आमा बुवाको काखबाट टाढा हुनुपर्दाको पीडादायी क्षणहरुले उनलाई निरस हैन स्पात बन्न सहयोग गर्यो । उनले जीवनका अनगिन्ती अप्ठयारहरुसंग डटेरै मुकाबिला गरिन् र बनिन् अनिताबाट वास्तविक बिजया ।।
बुवालाई मामा भन्नु पर्दाको पीडा
देशमा भिषण द्धन्द चलिरहेको थियो । द्धन्दमा उनका बाबु मुक्ति र आमुल परिवर्तनका लागि भनेर युद्धमा होमिईसकेका थिए । घरकी जेठी छोरीको रुपमा जन्म लिएकी विजया त्यतिबेला मात्र दुई वर्षकी थिइन् । उनको बुवासंग परिचय थिएन । सानै हुदा बुवा युद्धमा लागेका कारण परिचय हुन सकेको थिएन । माओवादी जनयुद्धले उग्ररुप लिदै गर्दा रोल्पा रुकुम रणभूमिमा परिणत हुदै थियो । उनको बाल मष्तिस्कमा पनि युद्धको अमिट छाप पर्दै गइरहेको थियो । सुरक्षाको दृष्टिले बुवालाई मामा भनेर चिनाइएको थियो । नजिकै प्रहरी चौकी भएको कारण पुलिस प्रशासनको उपस्थिति बाक्लै हुन्थ्यो ।
उनीहरुले बिजयालाई घरमा बुवा आउनु हुन्छ की नाई भन्दा उनी निर्धक्क भन्थिन नाई कहिल्यै आउनुहुन्न ,किनकी उनलाई बुवा भन्ने परिचय नै दिइएको थिएन । तर बेला–बेला मामाको रुपधारण गरेर आउने व्यक्ति नै उनका बुवा थिए । जुनदिन उनलाई आफ्नाे बुवासग भेट गराइयो, मामाको साइनोले चिनाइयो । बाबु भनेर चिनाउदा सेना र प्रहरीबाट उनको ज्यानको खतरा थियो । जब कुनै बाबु आपूmले जन्माएका छोरा–छोरी सामु आफ्नाे साइनो लुकाएर उभिनु पर्दाको त्यो क्षण कुनै हिन्दी चलचित्रको सिन भन्दा फरक थिएन । उनी स्मरण गर्छीन् युद्धको बेला म २ वर्षकी मात्र थिए, बुवा विदामा आउनुहुन्थ्यो तर बुवा भनेर चिन्न पाउदैन थियौं । बुवालाई मामा भन्थ्यौं ।मामाहरू आउनुहुन्थ्यो, बेलुकी बस्नुहुन्थ्यो भोली पल्ट विहानै जानुहुन्थ्यो ।
जब राज्यले बुवाको टाउकाको मूल्य तोक्यो ( बिजयाका बुवा-आमा )
उनका बुवा नेता थिए राज्यले प्रायः माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो । उनी भन्छीन् –मेरो बुवाको टाउकोको मूल्य ५० हजार तोकिएको थियो । मलाई लाग्थ्यो मेरो बुवाको टाउकाको मुल्य किन तोकीयो होला भन्ने खुलदुली भइरहन्थ्यो ।
बुवा शहीद भएका खबरहरु निरन्तर ढोकाबाट छिर्न थाले
०५६ सालतिर सुदुुर पश्चिममा बुवा शहीद भएको पहिलो खबर आयो । उनी स्मरण गर्छिन् मन आकुल ब्याकुल भयो छटपटि भयो । त्यतीबेला उनी अलि बुझ्ने भैसकेकी थिइन् । उनीहरुलाई शहिद परिवार घोषणा गरियो । शहिद परिवार भनेर धेरै मान्छेहरू उनको घरमा भेट्न आए । उनलाई लाग्ने गथ्र्यो किन यति धेरै मान्छेहरु हाम्रो घरमा जम्मा होलान् ? बुवा शहिद भएको भन्ने कुरा उनको बाल मष्तिस्कले ठम्याउन सकिरहेको थिएन ।
घरमा आएका मान्छेहरुले उनका बुवाको मृत्यु भएको कुरा गर्दा उनी खुब चासो दिएर सुन्ने गर्थिन् । बुवाको मृत्युको खबरपछि उनकी आमाले पनि ‘घर छोड्ने’ निर्णय गरिन् । देश र जनताको लागि बुवाले बगाएको रगतको बदला लिन भनेर युद्धमा निस्कीइन । जब आमाले पनि घर छोडिन्, उनको काधमा ठूलो जिम्मेवारी आयो । घर समाल्ने आफू सानै भएपनि घरका ठूला–ठूला जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अबस्था आइपर्यो उनको काधमा । उनी सकी नसकी घरको काममा लागिन् ।
फेरी एक दिन चिठी र खबर एकसाथ पुगे… उनकी आमाले पनि घर छोडेको ६ महिना भैसेको थियो । एकदिन बुवाको चिठी आयो ‘आफू आरम रहेको, तर घरमा शहिद परिवार भनेर भेट्न आउने मान्छेहरूको क्रम रोकिएको थिएन । कसरी पत्याउन सक्थिन् र त्यो चिठीलाई उनले । एकातिर शहिद परिवार भेट्नेहरुको लाईन, अर्कोतिर शहीद भनिएको बाबाको चिठी । उनको लागि त्यो वास्तकिता चलचित्रको कथा जस्तै लाग्यो । चिठी उनकी आमाको नाममा आएको थियो । तर आमा पनि घरमा थिइनन् । आमाले पनि घर छोडेको महिनाैँ भइसकेको थियो । आमा आफ्नो पतिको हत्याराको बदला लिन युद्धमा होमिईसकेकी थिइन् । उनका काकाले चिठी पढेर सुनाइदिए । चिठी सुनेर अच्चमित भइन् बिजया ।
उनी भन्छिन् – ‘खै त्यो बेला पत्याउन सकिने अवस्था नै थिएन । तै पनि खुशीको सीमा रहेन ।’ मरिसकेको भनेर आश मारेको बु्वाको पत्र आउदा उनी खुशीले गद्गद् भइन् । मेरो बुवाको चिठी आयो भन्दै गाउभरी एक फन्को मारिन् तर आमा साथमा नभएको कारण मनमा चिसो भने रहिरह्यो । संयोगबस चिठी आएको केही दिनमा शहीद भएका बुवा घरमा आए र आमा पनि टुप्लुक्क घरमै आइपुगिन् । दुवैको जम्काभेट भयो । जीवनको सबैभन्दा खुशीको त्यो क्षण उनको परिवारको लागि कालजयी क्षण बन्यो ।
बुवा–आमासंगै युद्धकी छोरी बनिन् बिजया पनि
०५९ सालमा उनका बुवाले बिजयालाई पनि सूदूरपश्चिम लिएर गए । संगै बस्न सक्ने स्थिति भएन । कोसंग बस्ने ? कोसंग बोल्ने केही थाहा थिएन । बुवाको मृत्युको दोस्रो खबरपछि दिदिबहीनीहरु एकै ठाउमा बस्ने निधो भयो । एउटी बाहिनी कैलाली थिइन् । उसलाई ल्याउने अवस्था मिलेको थिएन । जनयुद्ध झन्झन् चर्किदै गयो । ०५८ सालमा उनका बुवाले वहिनीहरूलाई सुदुरपश्चिम लिएर गएका थिए । सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको थियो रोल्पा रुकुमलाई झन तारो बनाएको थियो ।
शहीद भनिएको बुवाको स्वर सुनेर हिक्की –हिक्की रोएको त्यो दिन……
उनी भन्छिन्–बुवाको मृत्युको खबरप्रति हामी विश्वस्त थियौं । एक्काशी बुवाको स्वर रेर्कड भएको टेप आयो । बहिनीहरु संगीता, अश्मिता र मनिषा पनि म संगै थिए । टेपमा चार बहिनीलाई सम्बोधन गरिएको थियो । उनलाई पत्यार लागेन । पत्याउन सक्ने कुनै आधार थिएन । यो स्वर पुरानो हुनसक्छ भन्ने भयो । किनकी उनकी बहिनी लिएर कालिकोट जादासम्म बुवा हुनुहुन्न भन्ने नै थियो । उनी भन्छीन– क्यासेट सुन्यौं, क्यासेटमा भन्नुभएको थियो,–‘मेरी जेठी छोरी तिमीलाई धेरै–धेरै सम्झना छ । हामी वर्ग संघर्षमा छौं । जतिबेला जे पनि हुनसक्छ । आफ्नाे ख्याल गर्नु । ममीलाई सम्हालेर राख्नु । युद्धको बेला कुनै कारणबस केही भयो भने परिवारको जिम्मा तिमीलाई सुम्पेको छु । तिमी मेरो जेठो छोरा पनि त हौ । यदि केही भयो भने जुन बाटो मैले रोजेको छु , त्यो राम्रो छ भने कहिले पनि नछोड्नु । सबै बहिनीहरूलाई त्यसरी नै सम्झाउनु ।’ उनी भन्छिन्– ‘यो रेकर्ड अहिले पनि मन मष्तिस्कमा ताजै छ । त्यो दिन त्यो स्वर सुनेर उनि हिक्की हिक्की रोइन ।’
मेरा प्रिय अपरिचित बहिनीहरू..
( आमा-बुवा र बहिनीहरुका साथमा बिजया )
घर छोडेर सुदुरपश्चिम गइसकेपछि पनि दिदी–बहिनीबीच चिनजान भएको थिएन । उनी भन्छिन्– ‘हामी अछाम जादै थियौं । बुवा बाटोमा विरामी हुनुभयो । हामीलाई कालीकोट छाडेर आफ्नाे कार्यक्षत्र तर्फ जानुभयो । कालीकोटको मालकोटमा पढ्ने व्यवस्था मिल्यो । ’ त्यसपछि बालसंरक्षणलाई कालिकोटकै मम्रा भन्ने स्थानमा लगियो । एकदिन उनकी आमा बहिनीलाई लिन कैलाली गइन् । उनी पनि आमासगै त्यतै गइन् । त्यतिबेलासम्म दिदीबहिनीबीच चिनजान थिएन । सुरक्षाको दृष्टिले पहिले नै उनर्का बुवाले कैलाली छोडेका थिए । उनी निकै आतुर थिइन् आफ्नी प्यारी बहिनीलाई भेटन् । त्यसैले उनी पनि आमासंगै कैलाली मसुरीया पुगिन् । त्यतिबेला बहिनी कैलाली सापकोटा थर भएका मान्छेको घरमा बसीरहेकी थिइन् ।
जब आफनै बहिनीले फुपु भनिन्…….
धेरै लामो समयपछि बहिनीलाई देख्न उनका आतुर आँखा चलबलाई रहेका थिए । त्यहाँ पुगीसक्दा पनि उनलाई थाह भएन की हामी बहिनी भएको घरमा पुगीसकेका छौँ । उनी दिनभर साथीहरुसंग खेलीन् त्यही मध्यकी एउटी उनलाई फुपु भनिरहेकी थिइन् । माओवादीभित्र त्यतीबेला अंकल फुपु चल्तीको भाषा थियो । उनलाई बहिनी कतिबेला चिन्ने भन्ने व्यग्रता मनमा थियो । उनले सुटुक्क आमाको कानमा भनिन् – ‘आमा हाम्रो बहिनी को हो ? ’ आमाले आँखाभरी आँसु पार्दे भनीन्– ‘उ त्यो हो । ’ जो पहिला आमालाई अन्टी भनेर संबोधन गरीरहेकी साथी थिइन्, उनलाई पनि आफ्नी आमा यिनै हुन् भन्ने हेक्का थिएन सायद । बिजया छक्क परिन् अघिसम्म संगै खेलिरहेकी साथी जो फुपु–भदै साइनोले चिनजान भएको थियो, उनै पात्र पो रहेछीन् बहिनी। त्यतिबेला उनलाई निक्कै नरमाईलो लाग्यो । आफ्नो भाईबहिनीलाई पनि चिन्न नपाउने कस्तो जीवन जिइएछ भन्दै खिन्न महशुस गरिन् ।
सापकोटा माओवदी सर्मथक थिए । त्यसैले उनका बुवाले सुरक्षाको दृष्टिले छोरीलाई त्यहा राखेका थिए । उनकी बहिनीलाई लिन उनीहरु आएका थिए तर बहिनी जान्न भनिरहेकी थिइन् । म जान्न मेरो बुवा ममि यतै छन्’ भनिरहेकी थिइन् । उनकी बहिनीले उनीहरुसंग खेल्ने बेला फुलबारीबाट ‘मोटी आन्टी आउनु भएको छ’ भनेर भनेकी थिइन् । आफ्नो नाम अस्मिता सापकोटा भन्थिन् ।
शहीद बुवाको नाममा कविता कारेपछि…..
०५९ देखि उनी कालीकोट बस्न थालिन् । जनयुद्धको बेला शहीद बेपताहरुको लागि जनवादी स्कूल खोलिएको थियो । त्यही उनले संरक्षण र पढन पाएकी थिइन् , उनी त्यही जनवादी विद्यालयमा पढ्न थालिन् । युद्धको बाताबरणले उनलाई बिस्तारै साहित्यतिर उन्मुख गरायो अनि शहीद बुवाको सम्झनामा यसरी कविता लेखिन् …
को फूल्छ र झरेपछि फूल्ने गरि झर्यौ तिमी
को बाच्छ र मरेपछि बाँच्ने गरि मर्यौ तिमी ।।
सगरमाथा भन्दा माथि नदेखीने आकाश जस्तै टाढा भई हजार सपना जताततै छर्यो तिमी ।।.
स्कूलको नाम थियो प्रकाश नमुना जनवादी विद्यालय । उनले जनवादी विद्यालयमा ५ देखि सात कक्षासम्म पढीन ।
यसरी बनिन् अनिताबाट बिजया
उनको वास्तविक नाम अनिता थियो । तर माआवादीमा सांकेतिक नाम राख्ने चलन ब्यापक थियो । उनका सरहरुले सबै कुरा बुझेकाले उनको नाम बिजया राखीदिए । उनलाई आफनो नाम परीबर्तन भएकोमा खुशी नै लाग्यो हिनताबोध पटक्कै भएन ।
बुवा आउने खबरको पर्खाइमा जुनदिन…..
उनी भन्छिन्– कहिलेकाही कुवेर अंकल हुनुहुन्थ्यो । उहा भन्नु हुन्थ्यो ‘तिम्रो बुवा केही महिनापछि आउनुहुन्छ, सुदुरपश्चिमको कैलालीमा हुनुहुन्छ । उहा सन्चै हुनुहुन्छ । ’ तर उनी ढुक्क बन्दिनथिन् । केहो – केहो युद्धमा कस्को के भर हुन्छ र ? मनमनै सोच्थिन् । सबै आउने तर मेरा बुवा मात्रै नआउनुको पछाडि कारण के होला द्धिविधा भइरहन्थ्यो ।
युद्धबाट घर तिर लागियो
०६३ मा युद्धविरामको घोषणा भयो । त्यसपछि उनीहरु रित्तो मन लिएर भग्नावशेष अबस्थामा रहेको घर गुनाम फर्के । घर पुग्दा घर बास्तविक घर जस्तो थिएन । न्यास्रो लाग्ने घरले नै युद्धको बास्तविकता ओकलिरहेको थियो । कालिकोटबाट उनलाई रोल्पा पुर्याउदा पढाइ पनि सगै लैजानु थियो । उनी भन्छीन् ‘भर्ना गर्न प्रमाणपत्र चाहिदो रहेछ, हामीसंग केही थिएन । सर्टिफीकेट रुकुमबाट लिनुपर्ने भयो । तर सेकेन्ड डिभिजनको । मलाई मन परेन । ममी म बरु पढ्दिन । फर्केर कालिकोट जान्छु । म दोस्रो कहिल्यै भएको छैन’ भनेर जिद्धी गरिन् । जनवादी विद्यालयले ‘हरेक चिजमा जितेर आउछे भनेर मेरो नाम ‘विजया’ राखिदिएको हो । जनवादी विद्यालयमा ५ मा पढ्नेलाई ६ को हिसाब पढाउन लागाए । उनले सोचे जस्तै सबैलाई जितेर देखाइदिइन र प्रथम भइन ।
सरहरूले तिमी कसको छोरी हौ भनेर सोधे । उनले गुनामको दलजीत विकेको छोरी भएको परिचय दिइन । ‘दलजित त यो विद्यालयको सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी हो नी,’ सरले कँडेतार देखाउदै भने, ‘तिम्रो बुवाले विरेन्द्र राजासंग मागेको काडेतार देखेकी छौ ?’भलिबल राम्रो खेलेपछि राजा विरेन्द्रले तिमी के चाहान्छौ भनेर सोधेका थिए रे । हेडसरले स्कुलको लागि ‘तार माग’ भनेपछि । ‘दलजितले तत्कालीन
राजासंग तार मागेको मागेका थिए । हाम्रो स्कुलको सान भनेको तिम्रो बुवा हो,’ त्यतिबेला सरलेहरुले सम्झाए । त्यतिबेला बिजयालाई आफ्नो बुवाप्रति निकै गर्व लाग्यो ।
एसएलसी पछिका सपनाहरु
०६६ सालमा उनले बिरवल भद्र मा.बी थबाङ्गबाट फस्ट डिभिजनमा एसएलसी गरीन् । उनका बुवा जनसेनाको चौथो डिभिजन भिसि थिए । शहिद घाइतेहरूको केयर गर्नको लागि उनलार्ई स्टाफ नर्स पढाउने कुरा गरे । बुवाको सपना पुरा गर्ने अठोट गरीन । काठमाडौं आएर, चक्रवर्ती कलेजमा छात्रवृतिमा नाम निस्कियो । त्यहीबाट स्टाफ नर्सको पढाइ पुरा गरीनं ।
जब आमालाई मृगौला दिने निर्णय गरिन्……
उता समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । ६८ साल भदौ २६ गते जनसेना नेपाली सेनामा समायोजन भयो । एक्कासी आमाको स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्यो । २५ गते आमालाई आइसियूमा राख्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै कारण पनि उनका बुवा समायोजनमा गएनन् । यता उनको कलेजमा परीक्षा चलिरहेको थियो एकातिर आमा आईसियूमा ।
उनी दुई ढुंगाको तरुल सरी पिल्सीरहिन् भित्र–भित्रै । उता आमा आसियूमा भएको बेला मामाघरकीे हजुरआमा पनि बितीन् । त्यतिबेलै डाइलासिस् गर्नुपर्ने थाहा भयो उनलाईृ परीक्षा विग्रिए जस्तो लाग्यो । तर नतिजा राम्रै आयो पास भइन् । त्यसपछि उनले आमाको रोगको कारण मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी विषयमा पढ्ने निधो गरिन् । बनस्थलीमा रहेको राष्ट्रिय मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा ३ महिने कोर्ष गरिन् । आमाको डायलाईसिस नै गर्नुपर्छ भन्ने उनलार्ई लागेको थियो । डायलायसिस गर्नुपर्ने भयो ।
उनी भन्छिन् ‘पहिले मैले केही विकल्प हुन्छ की भन्ने सोंचेकीे थिए । डाइलाईसिस गर्दै गयो भने भेन कोल्याप्स हुंदै जान्छ, फेस कालो हुन्छ, निकै गाह्रो हुन्छ । उनको आमाकोे मृगौलाले काम नगर्ने भइसकेको थियो । उनलाई शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरियो । अवस्था निकै चिन्ताजनक हुदै थियो । उनलाई बचाउन कसैको मृगौला दिनुपर्ने भयो ।’ उनलाई लाग्यो ‘मेरो कारणले परिवारको खुशी बच्छ भने मैले परिवारको लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । ’उनको बाबाको रगत मिलेन । उनले नै दिने निर्णय गरिन् । रगत मिल्नुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छिन् – ‘रगत जाच गराएं । ममी र मेरो ‘ब्लड’ मिल्यो । म त्यतिबेला निकै खुसी थिए । किन भने मैले आमालाई मृगौला दान गर्न पाएकोमा र बचाउन पाएंकोमा ।
’ पृथ्वीभन्दा महान् आमालाई बचाउन पाउनु उनले सौभाग्य ठानिन । यस्तो महसुश गर्दै थिए, ‘मलाई ममि र बुवाले जन्म दिनुभयो तर म त्यस्तो छोरी हुदैछु, अफ्नै आमालाई पुर्नजन्म दिने छोरी ।’ श्रीमान् वितेको खबर पटक–पटक सुनेकी आमा आफैंपनि पटक–पटक मृत्युसंग जुधेकी थिइन् । त्यो मात्रै होइन, लडाईंको मोर्चाहरुमा कयौं हार बेहोर्दै ब्याटलहरु जितेकी थिइन् । उनले अठोट गरीन आमा अब तपाईंलाई बचाउने मेरो कर्तव्य हो,’ आईसियु कक्षमा रहेकी आमालाई उनले बचन दिइन, ‘जन्माउनुभयो हुर्कानुभयो, युद्धका चरम संकटका बिचमा पनि सुखका साथ मायाममता र त्याग गर्नु भयो, यो मेरो कर्तव्य हो जो मैले छोरी हुनुको नाता पुरा गर्नै पर्छ । ’ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार माघमा उनले मृगौला दिने कुरा निधो भयो ।
शिक्षण अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षाको ५०९ ए मा भर्ना भए । त्यो दिन जीवनमा खुसीले सगरमाथा चुमेको दिनको रुपमा बुझिन् । आमालाई पूर्ण शरीर दिन नपाएपनि एउटा भाग दिन पाएकोमा खुशी भइन् । त्यसपछि उनी र आमाको भेट अपरेशन थिएटरमा भयो तर बोल्न पाएनन् । ‘विजया सिस्टर तपाईंको हात दिनु न,’ अपरेशन थिएटरमा डक्टरले भने, ‘यस्तो किन सोच्नुभयो ।’ हास्दै मेरो जवाफ थियो,‘ममिलाई बचाउन पनि सोच्नुपर्छ र ?’
उनले एकै चोटी पोस्ट अपरेट वार्डमा ल्याएपछि बुवालाई देखिन् । बुवाको आँखामा आशु देख्दा अप्ठेरो महशुस गरिन् तर त्यो दिन कहिल्यै आशु नझार्ने उनका बुवाको आँखामा आशु देंख्दा मन अशान्त बनाइरहिन् । उनी भन्छिन् – ‘त्यो आशुभित्र खुसी पनि थियो । हामीले आमालाई बचाएका थियौं । तर दुर्भाग्य केही दिनपछि मैले दिएको मृगौला मेरी आमाको शरिरले ‘रिफ्युज’ गरिदियो । त्यो क्षण एकाएक मेरा लागि जिन्दगीकै अन्धकार बनेर आइदियो ।’ मृगाैला दान गर्ने बेला उनका श्रीमानले पनि साथ दिएका थिए । भनेका थिए बिजया अामा र बुवाकाे लागि जस्ताे सुकै त्याग गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न ।असल छाेरा छाेरीकाे कर्तव्य हाे बुवा अामाकाे लागि बलिदान गर्नु । मेराे यसमा तिमीलार्इ साथ र सहयाेग रहिरहने छ । ढूक्क संग अामाकाे उपचार सफल पार्नु पर्छ । उनि अाफनाे जिवन साथीले दिएकाे बचनकाे संधै स्रहन गर्छीन र भन्छिन साेचे जस्तै जिवनसाथी पाएकी छु ।
बुवा मन्त्री भएको रात …..
( बुवा मन्त्री भैसकेपछि सिंहदरवारमा )
उनी ड्युटीमा ब्यस्त थिइन । राती एक्कासी उनको फेसबुक वालमा बुवालाई बधाइका ओइराहरु झर्न थाले ,उनी छक्क परिन् । एकछिन त सपना जस्तै ठानिन् । तर बास्तविकता नै थियो । उनका बुवा दलजित श्रीपाइली युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका थिए । उनलाई रात भरी छटपटि भइरहयो । बिहान सपथ कार्यक्रम थियो । उनी पनि सपथमा बुवासंगै गइन् । खुशी र चिन्ता दुवैै कुरा उनका अगाडि उभिएको महशुस गरिन् । तर बुवा मन्त्री भएको बेला उहाका साथीभाईहरुले गरेको व्यबहारप्रति उनी अच्चमित छिन् । मान्छेहरुको स्वार्थीपनलाई यसरी व्यक्त गर्छिन बिजया – ‘आमा बिरामी हुदा प्रायः बुवाका साथीहरु फोन अर्क ैकामले गरे पनि उठाउदैनथिए , किनकी हाम्रोे आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक थियो ।
’ उनी भन्छिन् ‘आमाको उपचार गर्न हामीले के मात्रै गर्नु परेन । आमा बिरामी हुदा सबैभन्दा तनाबमा बुवा हुनुहुन्थ्यो । चाहेर पनि बुवाको तनाबलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका थिएनौं । प्रायः बुवाका साथीहरुले पनि पैसा सापटी माग्छ की भनेर फोन नउठाएको प्रस्टै बुझिन्थ्यो । जब पार्टीले श्रेपाइलीलाई मन्त्री हुने निर्णय गर्यो त्यो रात बुवाको मोबाइल एकसाथ बिजीरहयो । अफ्ठेरो समयमा फोन गर्दा समेत नउठाउनेहरु नै बुवालाई बधाई दिईरहेका थिए । मान्छे चिन्ने भनेको यस्तै बेलामा रहेछ । तर बुवा भने विगतलाई बिर्सिएर सबैलाई समान व्यबहार गरिरहनु भएको थियो । सायद यो नै बुवाको महानता होला ।’
उनलाई भने बुवालाई चुनौती थपिएको महशुस गरीरहेकी थिइन । उनी साेच्थिन् अस्थिर राजनीति र देश अस्तव्यस्त भएको बेला चुनौतीको पर्खालमा बुवा मन्त्री हुन लाग्नु भएको छ । यो बुवाको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो अग्नीपरीक्षा हुनेछ । हुन त यो बुवाको लामो समयदेखिको त्याग, तपस्या, बलिदान र राजनैतिक जीवनको प्रतिफल हो । तर पनि सन्तोष ढंगले ग्रहण गर्ने समय नभएकोले उनलाई रातभरी चिन्ताले सताइरह्यो कोल्टो फेर्दै त्यो रात बिहानमा परिणत भयो ।
Related Posts निर्वाचनका लागि सुदुर पश्चिममा बम डिस्पोजल टोलीसहित अत्याधिक सुरक्षा व्यबस्था
भारतीय सीमा नाकामा संयुक्त गस्ती सुरु
दार्जीलिङमा भएको राज्य दमनको विरुद्धमा नेकपाको प्रदर्शन
राष्ट्रपतिले दिइन् निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने अनुमति
अबैध काठ बोकेको ट्रकसहित तीन जना पक्राउ
नारायणगढ-मुग्लिन सडक रात्रीको समयमा पनि बन्द गर्ने तयारी
वम विष्फोटमा मृत्यु भएका चन्द्रबहादुर सिंह बारे यस्तो छ नेकपा को आधिकारीक धारणा मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
निर्वाचन हुने स्थानमा बन्द आह्वान, बन्दकर्ताद्धारा सवारीसाधन निशाना मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
अछाममा वुथकेन्द्र नजिकै बम, सुरक्षामा चुनौती मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
‘बोक्सा’ आरोपमा वृद्धको विभत्स हत्या मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
निर्वाचनको दिन भारी वर्षा हुने मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
सिक्किममा भारतीय सेनाको वंकरमाथि चिनियाँ आक्रमण, वंकरहरु ध्वस्त एमाले कार्यकर्ताद्वारा चक्क़ु प्रहार गरि शिक्षक हत्याको प्रयास दाङ गोलीकाण्डको भित्रि रहस्य,रिपुमर्दन गणमा व्यापक असन्तुष्टी शुक्रबार ४:३० देखि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्द रहने, यस्तो छ कारण पेट्रोल बिक्रीबाट घाटा भएको भन्दै असार २० देखि पेट्रोल नबेच्ने ब्यवसायीको घोषणा दैवि शक्तिले सिंहासन फर्किहाल्छ भन्ने लाग्छ र पारस ज्यू ? ‘जन्मथलो गोर्खाल्याण्डमा बलेको आगोले यता हाम्रो मन भतभती पोलिरहेको छ’ बेइजिङ-साङ्घाई गुड्न थाल्यो हालसम्मकै द्रुत गतिको रेल पाल्पाका १८ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील बाल्टिक क्षेत्रमा रुसले आफ्नो विमान लखेटेपछि पेन्टागनलाई तनाब वम विष्फोटमा मृत्यु भएका चन्द्रबहादुर सिंह बारे यस्तो छ नेकपा को आधिकारीक धारणा मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
काठमाडौं, सोमबार राती बम विष्फोटमा मृत्यु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कैलाली जिल्ला सदस्य चन्द्रबहादुर सिंह... निर्वाचन हुने स्थानमा बन्द आह्वान, बन्दकर्ताद्धारा सवारीसाधन निशाना मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बुधवारको निर्वाचन विरुद्ध दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने ठाउँहरुमा वन्दको आह्वान... सिक्किममा भारतीय सेनाको वंकरमाथि चिनियाँ आक्रमण, वंकरहरु ध्वस्त सोमवार, असार १२, २०७४0responses
गएका १० दिनदेखि चिनियाँ सैनिकहरुको पिछा गरेको भारतीय सेनाले सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको सामना... दार्जीलिङमा भएको राज्य दमनको विरुद्धमा नेकपाको प्रदर्शन सोमवार, असार १२, २०७४0responses
काठमाडौं, दार्जीलिङमा नेपाली भाषीमाथि भएको राज्य दमनको विरुद्धमा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय... विप्लव नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को आधिकारिक वेभसाइट सार्वजनिक सोमवार, असार १२, २०७४0responses
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वेभसाइट सार्वजनिक भएको छ । वेभसाइटको नाम www.thecpn.org रहेको छ... Our Facebook Page